I-Adder Technology entsha ye-AdDERLink ™ INFINITY ye-3000 inika abasasazi ukuFikelela kwexesha elifanelekileyo | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB Show LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » Okufumaneka » Itekhnoloji yeAdder yeADDERLink ™ INFINITY ye3000 inika abasasazi ukufikelela okwangoku
Itekhnoloji yeAdder yeADDERLink ™ INFINITY ye3000 inika abasasazi ukufikelela okwangoku
Umxholo omkhulu ngowona mvuzo mhle anokubonelelwa ngabapapashi babo. Kodwa nayiphi na imveliso ifuna itekhnoloji elungileyo ukuze kubekho ukubonakaliswa kweenkwenkwezi. Ukuba uyilo lunokufumana uqhagamshelo olufanelekileyo ukuze luhambise umxholo walo, lwenza ukufikelela kwabo kuncedo ngakumbi ngakumbi. Kungenxa yoko le nto ishishini lineenkokheli zonxibelelwano ezinje I-Adder Technology onikezela isisombululo soqhagamshelo kunye nokusebenza okuphezulu, ngokungathandabuzekiyo iindawo eziphambili zentloko yazo, ezinentloko ezimbini, i-USB 2.0 IP KVM extender, I-ADDERLink ™ INFINITY 3000.
malunga I-Adder Technology
Ukusukela ngonyaka ka-1984, I-Adder Technology Ukhule waba yinkokeli yehlabathi kwizisombululo zonxibelelwano kunye nokusebenza kwe-IP KVM ephezulu. Adder's Ubuchwephesha kwilifa lobugcisa buye batyhalela phambili kuphuhliso kunye nokwenziwa kweemveliso ezikhokelela kwimarike ezizisa abathengi kokubini kulawulo noxolo lwengqondo ngokulawulwa kwezicelo ezibaluleke kakhulu, kuluhlu olubanzi lwamashishini.
I-Adder Technology isebenza njengeshishini elinomvuzo nelishukumisayo lokuba yinxalenye kwaye lizinikezele ekuboneleleni ngemeko enomdla nenobuchule yokukhula kunye nempumelelo kwixesha elizayo. Adder's Uluhlu lokutshintsha, ukwandisa, kunye nezisombululo ze-IP ezenza ukuba kubekho ulawulo oluthembekileyo lweenkqubo zekhaya, ezikude, kunye neenkqubo zehlabathi ze-IT kumashishini anjengokusasaza, ukuyalela nokulawula, ukuthutha, ukubhenka, ukuhambisa ezonyango kunye nobumbano. Inkampani idume ngokugqwesa kwezobuchwephesha, ukusebenza ngokuthembekileyo, kunye nokwenza imveliso eyomeleleyo, kwaye uluhlu lwayo olupheleleyo lweemveliso lufezekiswa yinkonzo ebanzi yokubonelela ngenkonzo, eyenza abathengi abakuluhlu lwamashishini awahlukeneyo ukwandisa, ukutshintsha, matrix kunye nokulawula ukude komda. nokuba kukwindawo okanye nge-IP. I-Adder Technology iyanceda ekusombululeni uxhulumaniso lwe-IT kunye nemingeni yokufikelela kude kwizicelo ezigxile kwimisebenzi ephangaleleyo kwiindawo ezahlukeneyo, kunye nokutsha kwayo I-ADDERLink ™ INFINITY 3000, ngokuqinisekileyo iya kuqhubeka nokuphumeza i-feat.
I-ADDERLink ™ INFINITY 3000
Ngaphambili kwangonyaka, i I-ADDERLink ™ INFINITY 3000, okanye I-ALIF3000wakhululwa. I I-ALIF3000 ihambisa ukufikelela okwenyani koomatshini abangasenakusebenza ngokomzimba kunye nabonakalayo kumatshini wokujongana nomntu omnye (i-HMI). Olu ngcelele lwezixhobo lwenziwe ngokuchanekileyo ngexesha lokuxhasa usasazo lwezemidlalo kunye neengcali zemveliso njengoko zijongwa njengezixhamla kukuguquguquka kunye namathuba okukhula anikezelwa zizicelo ezenziwe ngokulula. Oku kubenza ukuba bakwazi ukufikelela ngaphandle komthungo bobabini oomatshini bomzimba kunye neidesktops ezibonakalayo ngexesha langempela. Ukongeza kwi I-ADDERLink ™ INFINITY 3000, I-Adder Technology Inesisombululo se-4K se-IP ye-KVM eyahlukeneyo I-ADDERLink ™ INFINITY 4000 Series, kunye ne-ADDERLink ipep +. Oku kwenza ukuba iingcali zosasazo kunye namajelo eendaba akwazi ukufikelela nokuhlela HD ividiyo evela naphi na kwihlabathi jikelele ngokungathi yadityaniswa ekuhlaleni.
The I-ALIF3000's uyilo luyayivumela ukuba idibanise ukufikelela kwe-VM kwinethiwekhi ekhoyo ye-ADDERLink INFINITY ngaphandle kokujongana nokuphazamiseka, ixesha lokuphumla, okanye iindleko zokubuyisa iindleko. Yakhelwe kwimpumelelo IntelUyilo loyilo lwe-microprocessor ® X-86, eyivumelayo ukuba ihambise umfanekiso we-pixel-ogqibeleleyo womgangatho, iaudiyo kunye ne-USB 2.0 kwizikrini ezizodwa okanye ezibini ngaphezulu kwekhonkco elinye le-1GbE.
Ngokudibanisa i I-ALIF3000 ne UMPHATHI we-ADDERLink INFINITY (AIM), abalawuli banokucacisa ngokucacileyo amalungelo okufikelela kumsebenzisi akhuselekileyo ukuqinisekisa ukuba iiPC ekujoliswe kuzo zinokufikelelwa kuphela ngabasebenzisi abavunyelweyo-ukunika abanini bamashishini uxolo lwengqondo kunye nokuqiniseka.
Iimpawu ezongeziweyo ze I-ALIF3000 ziquka:
Isongezelelo. Umgama: Unlimited ngaphezulu kwe-IP / 100m ngaphezulu kwe-CATx okanye ifayibha
Isigqibo: ukuya kuthi ga kwi-2560 ×[imeyile ikhuselwe]
Inani leZikrini: Ukuya kwi-2
Ngolwazi olungakumbi malunga I-ALIF3000, tyelela www.adder.com/en/kvm-solutions/adderlink-infinity-3000.
Ngoba I-Adder Technology Umhle kubasasazi
Adder's Iminyaka emithathu enesiqingatha yelifa liyivumele ukuba isebenze nabanye abasasazi behlabathi abakhokelayo ekuyileni nasekwenzeni isitshintshi se-KVM, isandisi kunye nezisombululo ze-matrix ukuxhasa ukuhamba komsebenzi ngokubanzi. Kwaye oku ukuhamba komsebenzi kususela ekudalweni nasemva kwemveliso ukusasaza amagumbi okulawula kunye nendawo yokuhlala ehleliweyo. Itekhnoloji yeAdder umoya weshishini uzinziswe kwinkcubeko yenkampani esebenza nzima, ishukumisela, ibhiyozela, kwaye iyaqhubeka nokubonisa ubugcisa kwicandelo lobunjineli bobugcisa eliqhubeka phambili. I-Adder Technology ilungile ukuba abasasazi bajonge ukuba banezisombululo ezivakalayo zonxibelelwano kunye nokusebenza kwe-IP KVM ephezulu.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga I-Adder Technology utyelelo www.gadidi.com/en.
Ekuseni naseMini Meteorologist - Oktobha 19, 2020
Bhala uMncedisi - Oktobha 19, 2020
Ukuphosisa umdibanisi - Oktobha 19, 2020
I-Adder Technology I-ADDERLink ipeps + I-ADDERLink ™ INFINITY 3000ADDERLink ™ INFINITY 3000 I-ADDERLink ™ INFINITY 4000 Series I-ALIF3000 Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli usasazo lobugcisa Izisombululo zonxibelelwano kunye nokusebenza okuphezulu kwe-IP KVM umxholo UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli I-Litra Matthews ujongano lomntu womatshini omnye SoftAtHome, MStar, iCES2017 Imikhonto kunye neentolo TVU Networks Injini yeVidiyo 2020-05-14
Previous: I-Penny Arcade Isebenzisa uyilo lweBlackmagic kwi-ATEM Mini yokuSakaza ukuSebenza ngokuSebenza
next: I-DPA Microphones 'MMA-Isinxibelelaniso seDijithali yeSandi siNgqineka ibalulekile kwimveliso-evela-ekhaya